ETH / USD က 2752 ကိုစိန်ခေါ်ဖို့လား။ Sally Ho ၏နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဇွန်လ ၁၁ ရက်၊ BitcoinEthereumNews.com
ETH / USD က 2752 ကိုစိန်ခေါ်ဖို့လား။ Sally Ho ၏နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဇွန် ၁၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ ETH
Ethereum (ETH / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) အပိုဆောင်းရှာဖွေခဲ့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှု အစောပိုင်းဒီနေ့ရဲ့ အာရှ pair တစုံကုန်သွယ်ဆက်လက်အဖြစ် session တစ်ခု အောက်တွင် အ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - အရေးကြီးသော 3000 ပုံ ယင်း၏အောက်ပါ မေမေတန်ဖိုး မှ တစ်သက်တာလုံး အဆိုပါန်းကျင် 4384.43 အဆင့်အထိ. မှတ်တိုင်များ မကြာသေးမီကခဲ့ကြသည် အောက်တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည် အ 2615.91 ကိုယ်စားပြုရိယာ ၃၈.၂% ပြန်လည်ရရှိသည် ၏ တန်ဖိုးအကွာအဝေး မှ 2884 သို့ 2182.20။ အပိုဆောင်း မှတ်တိုင်များ မကြာသေးမီကခဲ့ကြသည် အောက်တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည် အပိုဆောင်း downside ပြန်ဆင့်အဆင့်ဆင့် အတူတူပါ အကွာအဝေးယင်းအပါအဝင် 2533.10, 2450.29နှင့် 2347.82 အဆင့်ဆင့်. ဖိအားရောင်း iနတ်သမီး မှ 3567.40 မကြာသေးမီကareaရိယာနှင့် မှတ်တိုင်များ ခဲ့ကြ အောက်တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည် တော်တော်များများ အကျဘက်စျေးနှုန်းရည်ရွယ်ချက်များ နှင့်ဒေသများ၏ အလားအလာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုယင်းအပါအဝင် 3485.38, 3212.13, 2938.87, 2725.38, 2600.77, 2549.82, 2451.84, 2334.65, 2178.29, 2054.25, 1987.71, 1944, 1912.06နှင့် 1874.99 အဆင့်ဆင့်.
အလားအလာ နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့ အဆင့်ဆင့် နေစဉ်အတွင်း ကဗျာ အဆိုပါပါဝင်သည် 1783.89, 1755.41, 1730.47, 1456.03, 1371.71, 1317.79, 1229.48နှင့် 1103.49 အဆင့်ဆင့်။ မကြာသေးမီကာလအတွင်း ကြေးဇူးတငျကွောငျး တစ်ဦးမှ All-အချိန်မြင့်မားတဲ့ အဆိုပါန်းကျင် 4384.43 ရိယာ, မှတ်တိုင်များ ခဲ့ကြ အထက်ရွေးကောက်တင်မြှောက် အ 3987.65, 4113.81နှင့် 4136.61 ဒေသများ, ထောက်စျေးနှုန်းရည်ရွယ်ချက်များ ဆက်စပ်သော သမိုင်းဝင်ဝယ်ယူမှုဖိအား ကြောင်းန်းကျင်အစပြု ၉၀၀၀ ပုံ။ အပိုဆောင်း စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များအပေါ် အဆိုပါပါဝင်သည် 4453.47, 4471.68, 4522.73, 4550.12နှင့် 4609.38 အဆင့်ဆင့်။ ကုန်သည်များက၎င်းကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည် 50-bar MA (၄ နာရီ) is မင်္ဂလာပါ ညွှန်ပြ အောက်တွင် အ 200-bar MA (၄ နာရီ) နှင့် အထက် အ 100-bar ကို MA (4 နာရီ) ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ 50-bar MA (တစ်နာရီလျှင်) is မင်္ဂလာပါ ညွှန်ပြ အောက်တွင် အ 100-bar MA (တစ်နာရီလျှင်) နှင့် အောက်တွင် အ 200-bar MA (တစ်နာရီလျှင်).
စျေးလှုပ်ရှားမှုအနီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် 100-bar ကို MA မှာ (4 နာရီ) 2622.28 နှင့် 50-bar ကို MA (အလုပ်ချိန်) မှာ 2539.62.
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့ ပတ်ပတ်လည်မျှော်လင့်ထားသည် 1860 / 1783.89 / 1755.41 နှင့် မှတ်တိုင်များ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာခုခံ ပတ်ပတ်လည်မျှော်လင့်ထားသည် 3122.22 / 3420.10 / 3788.66 နှင့် မှတ်တိုင်များ အထက်မျှော်လင့်ထားသည်။
On ၄ နာရီ ဇယား, နင် is Bullishly SlowD အထက် စဉ်တွင် MACD is Bearishly MACDAverage အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော.
On 60 မိနစ် ဇယား, နင် is Bearishly SlowD အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော စဉ်တွင် MACD is Bullishly MACDAverage အထက်.
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဒီကုန်သွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတိယပါတီကထောက်ပံ့ပေး, နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ။ ၎င်းသည် Crypto Daily ၏ရှုထောင့်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ဥပဒေရေးရာ၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ဘဏ္,ာရေးဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များအဖြစ်အသုံးပြုရန်လည်းရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိပါ။
Tags: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, စိန်ခေါ်မှု, ETH, ETHUSD, တွင်, ဇွန်လ, Sally, စက်မှုလက်မှု
Ethereum ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ လား။ သင်သည်ဤဇယားများကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်
GOP အထက်လွှတ်တော်အမတ် ၃ ဦး Biden တရားစီရင်ရေး Nominee Ketanji Brown Jackson ကိုမဲပေးရန်မဲပေးခဲ့သည်။